China 2020 umkhiqizi ophakeme 90% phansi ogcwalise izikhwama zokulala ngentengo yokuncintisana ifektri abakhiqizi | Xueruisha
Uma usakhathazekile ngokuthi ungayikhetha kanjani isikhwama sokulala ngaphandle, lokhu kuzoba ukukhetha kwakho okuhle kakhulu. Lesi sikhwama sokulala somama esiqinile isitayela esithuthukisiwe sakudala. Isebenzisa ukuminyana kokuqina kokuqina. Igebe eliphakathi kokuthungwa okuphezulu nangaphansi lincipha kancane kancane. Ukugcwaliswa kusatshalaliswa ngokulingana ngosayizi wengxenye yomzimba, okwenza ukusongwa jikelele kube ngcono. Inokugcinwa okuqinile kwemfudumalo futhi ibuye ihambisane nokuklama kwe-ergonomic. Isikimu sombala esikhulu simnyama ngaphandle futhi sibomvu ngaphakathi, esimelana nokungcola futhi sibe semfashinini ngokwengeziwe. Vele, uma unezinye izintandokazi zombala wesikhwama sokulala, sinikeza nezinsizakalo zokwenza umbala ngokwezifiso. Imibala ehlukahlukene yendwangu iyatholakala ongayikhetha. Izindwangu zethu zangaphandle ziphathwa ngokuxosha amanzi nobufakazi bezinyembezi, okulula kakhulu ukuwuhlanza futhi ungahlanzwa ngokusula okukodwa. Indwangu yesikhumba nayo iphathwa nge-anti-lint, engakwazi ukugoqa ngempumelelo ukugcwaliswa kwangaphakathi. Ukugcwaliswa kwalesi sikhwama sokulala kwenziwa ngedada elimhlophe elisezingeni eliphakeme ezansi, ngobuciko obuphezulu nokugcinwa kwemfudumalo okuhle kakhulu. Sihlelele ngokukhethekile izinsimbi zokugcwalisa ezahlukahlukene ukuhlangabezana nezidingo ezithile zabantu abahlukahlukene ngamazinga okushisa, noma ngabe uhlela ukuyokhempa, ukukhuphuka izintaba, ukukhuphuka kwentaba, ukuhamba ngebhayisikili, ukudoba noma ukuhamba kungasetshenziswa ngokuya ngezinto ezahlukahlukene zokugcwalisa nokuzivumelanisa namazinga okushisa ahlukahlukene ezemvelo . Lesi sikhwama sokulala sisebenzisa ngokugcwele izici eziphansi zaphansi futhi sithatha isikhala esincane kakhulu ngemuva kokugcinwa. Ngeke kuthathe isikhala esiningi ekhaya noma esiqwini, okwenza ukuhamba kwakho kube lula. Sinikeza izinsizakalo eziningi ezenziwe ngezifiso, njengokuphrinta i-LOGO, amaphethini, ukugcwaliswa, njll, noma ukuguqula usayizi wesikhwama sokulala ngokuya ngezidingo zakho. Wamukelekile ukubonisana nokuhleleka.
Amathiphu wokuthuthukisa izinga lokushisa lokulala
Khetha ukuma okulungile nosayizi wesikhwama sakho sokulala, khetha isikhwama sokulala esithungelwe ngokuya ngejika lomzimba womuntu, okuyilokho esikubiza ngokuthi yisikhwama sokulala esithi "Mummy". Inokusebenza okungcono kokugoqa, inciphisa isikhala sokugeleza komoya, ukuze ithuthukise ukugcinwa kwemfudumalo, futhi ngasikhathi sinye inciphisa isisindo, ukuze yenze imishini ingasindi. Ngaphezu kwalokho, lapho sikhetha izikhwama zokulala, sifana nezingubo Kuzoba nosayizi abakhulu, abaphakathi nabancane ongakhetha kubo, ngakho-ke kufanele ukhethe isikhwama sakho sokulala ngokuya ngobude bakho nomzimba. Uma isikhala sesikhwama sokulala sikhulu kakhulu, singafaka nezingubo ezithile ukwenza isikhala sibe sincane, ukuze kuzuzwe inhloso yokwenza ngcono imfudumalo. Futhi, singalungisa umucu odonswa emlonyeni wesikhwama sokulala ukuze sithuthukise ukufudumala noma ukushabalalisa ukushisa.
Langaphambilini 2020 ifektri ebusika umuntu omdala ongaphandle wekhempu idada / ihansi phansi isitolo sokulala esikhwameni
Olandelayo: Ukuthengisa okushisayo kakhulu izikhwama zokulala zomama ezingangeni umoya ezingangeni kubazingeli bezempi
2019 okusha design nomkhiqizi ukukhanya okunethezeka comfo ...